Ungaziqondisa kanjani izinwele ngofulawa we-cornstarch | Bezzia
Uma ufuna indlela yemvelo yokuqondisa izinwele zakho ngaphandle kokusebenzisa amakhemikhali namathuluzi okushisa, ufulawa weMaizena ungowakho. Umkhiqizo olula ukuthola, ongabizi futhi ophelele ongawusebenzisa njengesifihla-buso sezinwele. Ngenxa yezindawo zayo eziningi, kuyinzuzo ngempela empilweni yezinwele. Phakathi kokunye, ufulawa wommbila noma isitashi sommbila siqukethe insimbi, amavithamini kanye namaminerali.
Zonke, izinto ezinomsoco nama-antioxidants avumela ukuthuthukisa ukwakheka kwe-capillary uma isetshenziswa ngaphandle. Okusho ukuthi, uma ufaka ummbila ezinweleni zakho, lokhu izinzuzo ezivela kuzo zonke izici zokudla okunempilo kwalokhu kudla. Okuvumela ukondla izinwele kusuka ngaphakathi, kube ukuthamba, ukumelana ngokwengeziwe, kuqede i-frizz futhi kusize isitayela.
1 Isigaxa se-cornstarch sokuqondisa izinwele
1.1 I-cornstarch no-honey mask ukuqondisa izinwele
1.2 Kufanele ngiyisebenzise kangaki imaski?
Isigaxa se-cornstarch sokuqondisa izinwele
Ufulawa wommbila noma isitashi sommbila ungasetshenziswa ngezithako ezahlukahlukene ngokuya ngomphumela ofuna ukuwuthola. Uma ubheke ukwenza ngcono izinwele ezilimazwe ngamathuluzi wokushisa noma wokushisa, kuzodingeka uhlanganise isitashi sommbila nezinye izithako. Kusukela, yize I-cornstarch iyodwa isiza ukunciphisa i-frizz, ngokwayo ayinayo impahla ye- ukuqondisa izinwele.
Ukufeza le njongo, kufanele silungise imaski ngokususelwa kustarch corn kanye nezinye izithako. Kunezinketho eziningi futhi konke kunemiphumela emihle, yize kunokuhluka ngokuya ngohlobo lwezinwele. Uma une-mane egobile kakhulu, I-cornstarch izokusiza ukuthi uthambe futhi kube lula ukuhlanganisa izinwele. Kodwa-ke, kumane one-curl engachazwanga kahle, umphumela uzoba muhle kakhulu.
Qaphela izithako ozozidinga kule maski yommbila woju. Inhlanganisela yezakhamzimba zemvelo lapho uzofinyelela khona umugqa oqinile, othambile, ocwebezelayo nokuthi yini obukade ukufuna, izinwele eziqonde ngokwemvelo.
I-cornstarch no-honey mask ukuqondisa izinwele
Ukulungisa le maski yokuqondisa izinwele uzodinga izithako ezilandelayo. Qaphela kahle, kepha uma ungakwazi ukuthola uwoyela kakhukhunathi, ungayifaka esikhundleni samafutha omnqumo e-virgin.
4 wezipuni zikafulawa ukolweni
3 wezipuni ze honey
2 wezipuni ze uwoyela kakhukhunathi
ingilazi ye amanzi
Ukulungisa imaski kufanele ulandele lezi zinyathelo ezilandelayo.
Okokuqala hlanganisa isitashi samanzi namanzi abandayongaphandle kwalokho ngeke incibilike.
Thela ingxube epanini bese ulethe ekushiseni okuphansi. Hlanganisa njalo uze uthole unamathisele ngokuthungwa okufana nejeli.
Sishisa uwoyela kakhukhunathi ku-microwave imizuzwana embalwa ukuze ihlale iwuketshezi.
Esitsheni esikhulu, hlanganisa zonke izithako uze uthole isifihla-buso esinokhilimu. Kumele ibe nokuvumelana okufanayo ukuze ikwazi ukukusebenzisa ezinweleni.
Vumela imaski ifudumale ngenkathi uxubha izinwele zakho kahle.
Faka ingxube kuzo zonke izinwele zakho, ngaphandle kokuwasha, strand by strand kuze kumbozwe wonke umane.
Vumela i-cornstarch no-honey mask yenza imizuzu engama-30 noma engama-40.
Ukuqedela, hlambulula izinwele ngamanzi afudumele futhi ugeze izinwele zakho ngokujwayelekile.
Kufanele ngiyisebenzise kangaki imaski?
Kubalulekile ukuphinda inqubo ngezikhathi ezithile, ngoba kungaleso sikhathi kuphela lapho uzokwazi khona ukwazisa imiphumela. Ikakhulukazi uma unezinwele ezilimele noma ezomile kakhulu. Faka lesi sikhafu se-cornstarch noju phakathi kwezikhathi ezi-2 nezingu-4 ngesonto futhi uzokujabulela izinwele ezithambile, ezingazweli, ezilula ukuzikama futhi ngokushelela okubabazekayo. Uma unezinwele ezinamafutha noma uhlushwa ukuqhuma esikhunjeni, gwema ukufinyelela ezimpandeni zezinwele lapho ufaka imaski.
Njengeqhinga lokugcina, uma ufuna ukukhombisa umhlwenga ocwebezelayo, obushelelezi futhi othambile ngaphandle kokusebenzisa amathuluzi okushisa, shintsha i-cornstarch no-honey mask ngale ndlela elandelayo. Hlanganisa izipuni ezine ze-cornstarch nezingilazi ezi-4 zobisi lukakhukhunathi. Chaza ufulawa nokushisa uze uthole unamathisela osakhilimu. Uma unezinwele ezinde kakhulu noma eziningi, phinda amanani.
Lapho imaski isilungile, faka ezinweleni ezomile nezinamathele kahle. Shiya ihora bese uqeda ngokuhlanza ngamanzi afudumele, geza izinwele zakho ngokujwayelekile bese uzivumela ukuthi zome. Zonke lezi zithako zemvelo zizokusiza ukuthi ubonise umhlwenga omuhle, onomzimba nokuthungwa okuhle ukuze ulungele nganoma yisiphi isikhathi.
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Ubuhle » Ungazilungisa kanjani izinwele ngofulawa we-cornstarch
Ukubukeka kwehlobo kweStradivarius okungafanele ukuthi ukuphuthe